Mpanamboatra sy mpamatsy excavator any China | Masinina Dongheng
Endri-javatra amin'ny excavator anay
FITEHIRIZAM-BOKIN'NY BAIBOLY APRON
SILINA MANAN-TSAINA avo lenta
Ankoatr'izay, ny fomba tsy misy varavarankely dia raisina tsara amin'ny mpanjifa eropeana sy amerikanina.
KINGER mini crawler excavator dia novolavolaina miaraka amina fikirakirana avo, manome hery sy fahombiazana amin'ny habe kely izy io hanampiana anao hiasa amin'ireo rindranasa henjana indrindra. Araka ny fepetra takiana amin'ny asa samihafa, ny mpanjifa koa dia afaka misafidy fitaovana fampidirina excavator hafa avy amin'ny fatotra KINGER, toa ny tany auger, fanapahana hydraulic, trimmer fefy, grapple log, coupler haingana sns.
miaraka NACHI paompy hydraulic sy motera swing, PTM moto mandeha,Yanmar Engine,KYB sanda fitsinjarana, ny mpitrandraka KINGER mini antsika dia manana fahombiazana tsara amin'ny toe-javatra asa maro toa ny fananganana toeram-pambolena sy ny fanovana ny tanàn-dehibe.
Manaiky ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny T / T, carte de crédit, Western Union, MoneyGram, L / C sns izahay.
Raha 1pc ny kaomandy dia afaka mandefa ny entana any amin'ny Port Qingdao ao anatin'ny 25 andro aorian'ny nahazoana ny fandoavam-bola.Raha mihoatra ny 5 pcs, azafady mifandraisa aminay amin'ny fotoana fandefasana amin'ny antsipiriany. Azontsika atao ihany koa ny manatitra ny entana any amin'ny seranananao.
Izahay dia mpanamboatra matihanina amin'ny fananganana matihanina mihoatra ny 11 taona. Ny vokatray rehetra dia mahazo endrika CE sy taratasy fanamarinana ISO miaraka amin'ny kalitao avo sy milamina. Ho fanampin'izay, manaiky OEM izahay.
KINGER dia manana ekipa R&D henjana, serivisy mialoha ny varotra, serivisy aorian'ny varotra. Araka ny fitakian'ny mpanjifa dia afaka manome vahaolana feno izahay.
Izay ilainao mety hanana valiny haingana avy amin'ny KINGER.
Etsy ambony no misy ny famaritana sy fanamboaranay kely momba ny excavator ho anao. Misy fanontaniana tongasoa ato aminay, mampiasa motera, paompy ary maotera avo lenta avokoa izahay rehetra.
Previous: Earth auger
Manaraka: Rock grapple